Sida loogu xiro Android iyo talaabo talaabo talaabo ah | Androidsis
Cristina Torres sawir-haye | | Khiyaamada Android, Tababarada
Sida loo isku xiro Android si Mac? Waxay had iyo jeer la xiriirtaa iyadoo la adeegsanayo isla nidaamka mobilka sida adduunka qalabka aaladda desktop-ka. Xaqiiqdii, waxaan ula jeedaa inay caadi ahaan caadi tahay in haddii adeegsade uu leeyahay iPhone, ay iyaguna leeyihiin Mac.Yaa lehna Android, ama wuxuu doortaa Windows, ama waxaa u haray xulashooyin cusub sida Chromebooks. Laakiin Ka warran adeegsadayaasha haysta MAC iyo iPhone?
In kasta oo loo maleeyo in iyagu aysan aqlabiyad lahayn, marka la tixgeliyo in nidaamka hawl-galka desktop-ka ee Apple uu koboc weyn sameeyey sannadihii la soo dhaafay, iyo in Android ay tahay tan adduunka ugu isticmaalka badan, haddana waa inay jiraan xalal marka aan isweydiino sida loogu xiro Android iyo MAC. Marka haddii aad raadineyso sida loo fuliyo ficil umuuqda mid adag, waxaan hoos ku sharxeynaa sida loo sameeyo iyadoon dhibaato weyn la qabin.
1 Talaabo talaabo ah: sida loogu xiro Android-ka MAC
1.1 Dhibaatooyinka ka dhalan kara marka lagu xirayo Android-ka MAC
Talaabo talaabo ah: sida loogu xiro Android-ka MAC
Haddii aad mar horeba isku dayday ikhtiyaarka caadiga ah ku xirmaan Android-ka 'MAC' adoo isticmaalaya fiilo USB ah waxaad ogaan doontaa inaysan waxba dhicin. Taasi waa, ma heli kartid nidaamkaaga moobiilka sida uu u heli lahaa xaaladaha kale. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa isku dayday isku xirnaanta 'Bluetooth' sidoo kale, oo aan waxtar lahayn. Maxaad sameysaa Aad u fudud, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto barnaamij ku saabsan Mac-gaaga aan hoos ku faahfaahin doonno.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno si aan ugu xirno taleefanka Android kombiyuutarka MAC waa inaan soo dejino qalabka Bedelka Faylka Android kumbuyuutarkaaga.
Markaad rakibto, waa inaad kaliya furtaa Bedelka Faylka ee Android marka qalabkaagu ku xiran yahay. Dhab ahaan, mabda 'ahaan waa inuu si otomaatig ah u furnaadaa.
Si aad u awooddo ka helitaankaaga 'MAC' qalabkaaga Android waa inaad haysataa shaashadda mobilada oo furan.
Sidoo kale waa inaad hubisaa in ikhtiyaarka aaladda ee ku xirnaanta USB-ga ay ku jirto qaabka «qalabka Multimedia (MTP)»
Halkaas, waxaad ka awoodi doontaa inaad isticmaasho barnaamijka wareejinta faylka ee Android, jiido oo hoos u dhig faylasha si deg deg ah una wadaag inta udhaxeysa moobilkaaga iyo kombuyutarkaaga MAC
Isla marka aad dhameysid ficilada lagu fulinayo, kaliya waa inaad ka furaysaa fiilada USB-ga ee aad isticmaashay.
Dhibaatooyinka ka dhalan kara marka lagu xirayo Android-ka MAC
Haddii aadan heli karin Qalabka Android ee ka socda MAC Tilmaamaha aan ku siinay, waxaad isku dayi kartaa hababka soo socda si aad isugu daydo inaad u xalliso dhibaatada:
Hubi in fiiladaada USB-ga ay sax tahay, maadaama qaarkood aysan kuu oggolaanayn inaad wareejiso faylasha.
Falanqee haddii fiilada microUSB ee mobilkaagu si fiican u shaqeeyo
Ku tijaabi dekedda USB-ga kombiyuutarkaaga qalab kale si aad u hubiso inuu si fiican u shaqeynayo.
Hubso in qaabka USB-ka ee moobilkaaga Android uu u degsan yahay "Qalabka Multimedia (MTP)"
Cusboonaysii Android OS nooca ugu dambeeya ee la heli karo, maaddaama qaar ka mid ah is-waafajinta software-ka ay dhici karto.
Hubso in kombiyuutarkaagu leeyahay noocii ugu dambeeyay ee OS ee la heli karo iyo inay taageerto habka wareejinta faylasha laga soo wareejiyo Android-ka illaa MAC.
Dib u bilaw aaladda.
Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga.
Sida aad aragto, ku xirmaan Android-ka MAC Waa hawl fudud taladii aan ku siinayna waxay kaa caawin kartaa inaad xalliso dhibaatooyinka qaarkood oo ay sababi karaan cillad xagga qalabka ah ama xaqiiqda ah in software-ka aan la cusbooneysiinin si loo waafajiyo. Hada waa inaad tijaabisaa oo hadaad rabto nala wadaag khibradaada faallooyinka ma ku dhiiran kartaa inaad noo sheegto sida ay wax u dheceen?
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Mac waa inaadan u baahnayn samsung wadayaasha USB sida haddii ay ku dhacdo qaar ka mid ah boosteejooyinka shirkadda Kuuriya markii la doonayo in lagu xiro Windows.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Ku xir Android si aad u MAC
iyada oo loo marayo wifi, Bluetooth sidoo kale
Aad u fiican…. Waxaan xasuustaa in nokia-kayga aan ku xirmay waana intaas. laakiin hadda waa qaab kale, waa inaad u baahan tahay dhinac saddexaad. Waad ku mahadsantahay soo galinta
Ku jawaab jose Leal
Ku jawaab liptolipmakeup
ma shaqeyneyso, wuxuu furayaa daaqad cad mana joojinayo wax walba,
Cumar mireles dijo
Mahadsanid, inkasta oo ay umuuqato mid layaableh, bedelka fiilada ayaa xalka ahaa, waxaan isticmaalayay hal xamuul oo kaliya mana aanan dareemin, taladu waxay umuuqataa mid doqonimo ah ilaa aad dhibaatada ka baxdo, mahadsanid markale.
Ku jawaab Cumar Mireles
Aniga waxba iima tarin! ??? Waayo?
Jawaab Lynne Torres
Angels Calvet dijo
«Hubso in qaabka USB-ka ee moobilkaaga Android uu u degsan yahay" Qalabka Multimedia (MTP) "
Jawaab À Àngels Calvet
My Mac waa mid aad u da 'weyn (nooca 10.6.8) mana ii oggolaan doono inaan rakibo wareejinta faylka Android. Ma jiraa meel kale? Mahadsanid!
Aad u fiican ¡¡¡¡, waad ku mahadsan tahay, guul aad u faa'iido badan oo weyn casharka, waxaa ogolaaday ku xigeennadiisa.
Meelna ima siinayo, waxaan haystaa High Sierra oo taleefankayga gacanta ayaa ku jira qaabka MTP, waxay u muuqataa oo keliya "ku xir qalabkaaga", dalabka Samsung kuma habboona High Sierra sidoo kale.
Galab wanaagsan waxaan isku dayay kun siyaabood oo aan ku xiro Samsung Note 8-kayga iyo Mackeyga waxaan raacay talaabooyinka oo dhan mar walbana waxaan helaa qalad ah in qalabka aad kuxirantahay aan la aqoonsaneyn, maxaan kaloo qaban karaa
Ku jawaab felipe prieto acosta
wax ku ool ah, waxtar aad u wanaagsan. Way i caawisay.
Buenazooo !! Mahadsanid
Ku jawaab Elizabeth Calancha
Waxay u shaqeysay si qumman !!!! 😀
Ma soo dejin karo faylka
«Waa inaad sidoo kale hubisaa in ikhtiyaarka qalabka ku xirmaya USB-ga uu ku jiro qaabka" Qalabka Multimedia (MTP) "
Intaas oo dhami way fududahay in la sheego, laakiin way adag tahay in la helo. Xagee ka heli karaa "ikhtiyaarka aaladda ku xirnaanta USB" moblkeyga?
Waa inaad qofwalba lahadashaa, maxaa yeelay neerfaha aad umuuqato inaad lahadleyso waxay horeyba uyaqaanaan xalka dhibaatooyinkaas, taas oo ah, waa inaad waxwalba oo talaabo talaabo ah usharaxdid, adigoon waxba uqaadin.